प्रकाशित मितिः आइतवार, अशोज १४, २०६९ | 135 Views ||
मभित्र एउटा डर छ । नेपाली नागरिक भएको हैसियतले मैले न्याय पाउँछु नै भन्ने विश्वास छैन । अपाहिज परिवेश ओढेर हिँडेको बेला मेरो घर अर्काले डोजर लाएर लडाइदियो भने पनि म गर्न के सक्छु होला र ? मेरा बच्चालाई कसैले चोरेर मृगौला बेचिदियो भने पनि गर्न के सक्छु होला ? वा मेरो मिल्दो अनुहारलाई कसैले पैसा नतिरेको एजेन्ट ठानेर बीचै बाटामा झुक्किएर पिट्यो भने पनि मैले के गर्छु होला ? मलाई थाहा छैन र अहिले लाग्दैछ– सायद म सहन्छु ।
देश भनेको कस्तो हुनुपर्छ ? तीन दिन सोचेर जवाफ दे भन्यो भने पनि सायद दिन सक्दिनँ । कल्पना गर्न वा सपना देख्न पनि कहीँ कतै त्यसको झल्को हृदयमा पसेको हुनुपर्छ भने देशको त्यो झल्को मेरो हृदयमा कतिबेला पस्यो, सम्झना छैन । हो, परिवार कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोधिने हो भने केही जवाफ दिन्थेँ होला । साथी कस्तो हुनुपर्छ भनेर सोध्दा पनि जवाफ दिन्थेँ होला । त्यसका केही अनुभवहरु मसँग छन् तर नागरिक भएको अनुभव केलाई भन्ने ? अनुभूतिमा कतै आउन सकेको छैन । म नेपाली भएको कुराको बोध मलाई कहिले भएको हो ? कि अझै पनि भएको छैन कि वा मलाई नेपाली हुनुको जे–जस्तो अस्पष्ट बोध भइराखेको छ त्यो सही अर्थमा नेपाली हुनुको बोध नभएर अर्कै केही पो हो कि ?
छातीमा छाम्छु, देश कतै पनि भेट्टाउँदिनँ, खाली गिर्खा र विषादका फोकाहरु मात्रै छन् । देशमा नागरिक हुनु र घरमा छोरो हुनुमा के भिन्नता होला ? वा देशको नागरिक हुनु र विद्यालयको विद्यार्थी वा शिक्षक हुनुमा अन्तर के हो ? देश भएको मान्छेले के खान्छ ? के लाउँछ ? के सोच्छ, कहाँ जान्छ ? शरणार्थीहरु के हुन् ? उनीहरु देश नभएका कारण के कुराबाट वञ्चित हुन्छन् र म शरणार्थी हो कि होइन ? मेरो भाइ कतारमा छ, ऊ नागरिक हो कि होइन ? जनता हुनु र नागरिक हुनुमा भेद के हो ? त्यसमा म केमा पर्छु ?
नेपाल देश हाम्रो हो भनेर पढेको हो, अहिले पनि म त्यो पढाइरहेकै छु । नेपाल राम्रो देश हो, यहाँ विभिन्न जातजातिका मानिसहरु बसोबास गर्छन् । यो प्राकृतिक हिसाबले धनी र सुन्दर देश हो । यहाँ संस्कृतिका विभिन्न रुपहरु छन् । यस्ता सबै कुराले मेरो जीवनमा, मेरो बाँच्ने कुरामा के सहयोग ग¥यो, मैले बुझिराखेको छैन । अनि यी नहुँदा के अप्ठ्यारो थपिन्थ्यो भन्ने पनि बुझेको छैन ।
मलाई कहिलेकाहीँ त यस्तो लाग्छ, यो देश नभएको भए के हुन्थ्यो होला ? यहाँ टेथिस सागर त हुँदैनथ्यो । यो अर्को कुनै देश हुन्थ्यो होला । अनि हामी अर्कै देशको नागरिक हुँदा हामीलाई के फरक पथ्र्यो वा हामी देशविनाका मान्छे वा अनागरिक हुँदा हामीलाई के फरक पथ्र्यो ? त्यसले हामीलाई बाँच्न कति सजिलो वा कति अप्ठ्यारो पाथ्र्यो होला ? अहिले हामी नेपाली भएर वा नेपाल भन्ने देश भएर हामीलाई के–के कुरामा सजिलो भएको छ ? हिजो नेपाल बाइसी चौबिसीमा विभक्त हुँदा के–के कुरामा अप्ठ्यारो वा सजिलो थियो अनि पृथ्वीनारायणको पालामा राज्य विस्तार भएपछि हामीलाई केमा सजिलो र केमा असजिलो भयो ? अथवा नेपाल, भारत, पाकिस्तान वा अमेरिका केही नभनी हामी मान्छे हुन सक्थ्यौँ कि पशु हुँदा हौँ ?
कतै यो देश भन्ने कुरा ठूलाबडाले शासन गर्न बाँडेको भागबिलो त होइन ? अथवा देश भन्ने कुरा पैत्रिक सम्पत्ति जस्तो बाँडीचुँडी खाने कुरा त होइन ? अथवा देश भन्ने कुरा बेकारको भावना मात्रै त होइन ? स्वाभिमान, पहिचान वा मूल थलो भन्ने कुरा सब मानिसहरुलाई अलमलमा जेल्ने र बेकारको बहस चलाएर फटाहाहरुले गफ गरेर खाने तरिका त होइन ? केलाई मूल भन्ने जब असी लाखजति नेपालीहरु विदेशमा छन् । के उनीहरुले त्यहाँ बाँचेको जिन्दगी जिन्दगी होइन ? त्यो जीवन झुटो हो ? के बाहिर बाँच्नु भनेको नबाँच्नु सरह हो ?
एउटा मान्छेलाई देश किन चाहिन्छ ? देश नभएको मान्छे कोही हुन्छ कि हुँदैन ? गाई भैँसी वा खरायोको देश कहाँ हुन्छ ? हावाको सिमाना कहाँसम्म हो ? पानीको भूगोल कुन हो र सूर्यका किरणहरु कहाँका हुन् ? मृग वा बाघ र हातीको देश हुन्छ कि हुँदैन ? यिनीहरु कुन नियममा बाँच्छन् र मान्छेलाई बढी नियम किन चाहिएको हो ? सभ्यताले यी नियमहरु दिएका हुन् भने सभ्यताका कारण मानिसलाई के–के फाइदा भयो र ती फाइदाहरुको हिस्सा मैले पाउनु पर्छ कि पर्दैन ? फाइदाको हिस्सा मैले नपाउने हो भने मैले त्यसलाई सभ्यता भनेर जोगाउन लागिपर्नु पर्छ कि पर्दैन ?
Nextबालविवाह कसरी रोक्ने अविभावकको चिन्ता